नुहाउने क्रममा डुबेर दुई बालकको मृत्यु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
पोखरीमा नुहाउने क्रममा दुई बालकको डुबेर मृत्यु भएको छ । नुहाउने क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ रामगढवाका १४ वर्षीय नितेश पटेल र ११ वर्षीय सुदर्शन पटेलको डुबेर मृत्यु भएको हो ।
दुवै जना रामगढवाको ज्योतिनगरस्थित पोखरीमा मङ्गलबार बेलुका साथीसँग नुहाउन गएका थिए । अबेर रातिसम्म घर नफर्किएपछि खोजी गर्ने क्रममा आज बिहान उनीहरुको शव पोखरीमा फेला परेको प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले जानकारी दिनुभयो । दुवै बालकको शव परीक्षणका लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल लगिएको छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नै एप्स सार्वजनिक गर्दै ! स्थानीय तहलाई निःशुल्क मोबाइल एप्स!
काठमाडौँ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि विभागसँगको सहकार्यमा स्थानीय तहलाई निःशुल्क रुपमा मोबाइल एप्स उपलब्ध गराउने भएको छ ।
एप्समा स्थानीय तहको सङ्क्षिप्त परिचय र तथ्याङ्क, भौगर्भिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), जनप्रतिनिधिको तस्वीरसहितको सम्पर्क विवरण, सबै वडाहरुको नक्शासहितको वस्तुगत विवरण र सम्पर्क विवरण, ऐन कानून निर्देशिका, आपतकालीन नम्बर र योजना तथा परियोजनाका बारेमा जानकारी राख्न सकिनेछ ।
एप्स प्रयोगकर्ताले स्थानीय तहअन्तर्गतका समस्या र सुझाव सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउन सक्नेछन् । एप्समार्फत दर्ता भएको समस्या जिम्मेवार कर्मचारीले हेरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिनेछ ।